နည်းပြ: ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်နှင့်အတူခငျဗြားရဲ့စံ client ကိုဆွဲဆောင်ရန်ကဘယ်လို, ဗီဒီယို & Webinars - အံ့သြဖွယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသင်တန်းကို
နည်းပြ: ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်နှင့်အတူခငျဗြားရဲ့စံ client ကိုဆွဲဆောင်ရန်ကဘယ်လို, ဗီဒီယို & Webinars
၏ Desk ထံမှ
ချားလ်စ်ယောဟနျသ Verhoeff | ကမ္ဘာ့ဖလား Class ကိုမီဒီယာ၏ CEO
Los Angeles မြို့, ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်သည် USA
Until the end of the week on you can get my Private Coaching for HALF OFF.
I’m holding this special 50% OFF asaway to say THANK YOU to all the people who have watched my videos.
And I’m offeringaSpecial Mastermind Private Coaching Group!
This rare half-off special is my way of saying ‘THANK YOU’ for watching my online training.
—————– GET UP TO 50% OFF TODAY ——————
ထိုမယ်ဆိုရင် 50% discount isn’t enough to have you heading to my special ‘half-off’ Private Coaching Group, these FIVE deals WILL:
SPECIAL BONUS #1 – IMMEDIATE ACCESS TO MY “HOW TO CREATE, LAUNCH, MAINTAIN AND GROW AN ONLINE PRODUCT FROM SCRATCH COURSE”
Not only will I help WALK YOU THROUGH creatingasystem … My Team Will Help You Build It!
You Will Get Access to All Our Custom Designed Templates, Website Themes, Seven Figure Video Sales Copy and Custom Designed Power Point Templates!
SPECIAL BONUS #2 – Ask me anything in this private coaching group – each week I’ll uploadanew video answering all of the top questions.
Including: How To Get 78% More Engagement, Creating Videos That Sell – Creating Automatic “Drip” Email Sequences That Sell & Building Product Funnels From Scratch.
I’ll show you the exact systems I use plus give you the “Seven Figure Webinar, ဗီဒီယို & Sales Templates” + Powerpoint Templates I am using to make my clients over 100K per month regularly.
——————— 50% OFF FOR A LIMITED TIME ONLY —————————
… And I wanted to tell you about this COACHING and LIVE TRAINING WORKSHOP I’M GIVING – (တိုက်ရိုက်ရိုက်ကူးထား, IF YOU CAN’T MAKE IT) ငါသင်အားဖြင့်ကငျြ့ပါမညျနေရာ (သင်တို့ရှိသမျှသည် Template ပေးသော & အကူအညီဗွီဒီယို CREATE & ရောင်းစားသော WEBINARS).
ငါသည်သင်တို့ကိုငါအတိတ်နှစ်ပေါင်းကားခုနစ်နှစ်အတွက်လေ့လာသင်ယူခဲ့ကြအရာအားလုံးသင်ပေးဖို့လိုခငျြ – ကျော်နှင့်အတူ Websites များအတွက်ဗိသုကာပညာရှင်အဖြစ် 12 ၏လတစ်လနှင့် client ကိုအွန်လိုင်းစျေးကွက်ဘတ်ဂျက်နှုန်းသန်းကိုသှားရောကျလညျပတျ 1.5 တစ်နှစ်လျှင်သန်းအထိ.
I’ll show you the exact systems I am using to make my clients over 100K per month regularly.
I’m holding this special sale asaway to say THANK YOU to all the people who have asked me to create this training. And I’m offeringaSpecial BETA Course price.
Here’s where you can grab your copy and save 50%:
100% 30 Day ကိုကျေနပ်မှုအာမခံ
PayPal ကနေဖြင့်လုံခြုံ – သင်သည်မည်သည့်အချိန်ကိုပယ်ဖျက်နိုင်ပါသည်.
ပုံမှန်စျေးနှုန်းကို $2000 (အကောင်းဆုံး Value ကို) နှစ်စဉ် $970 – တဘက်က $1,030!
1 တစ်နှစ်တာစျေးနှုန်းကိုသာလျှင်ရန်နှိုင်းယှဉ်ထားသည် $80 တစ်လလျှင်!
[s2Member-PayPal-Button level=”1″ ccaps=”” desc=”SILVER Member / description and pricing details here.” ps=”paypal” lc=”” cc=”ယူအက်​​စ်ဒီ” dg=”0″ ns=”1″ custom=”amazingdigitaltraining.com” ta=”0″ tp=”0″ tt=”D” ra=”970″ rp=”1″ rt=”Y” rr=”1″ rrt=”” rra=”1″ image=”default” output=”button” /]
Here’s Your Training Agenda:
Exclusive Coaching + ကျော် 15 Training Videos
ထိုခဏခြင်းတွင်ကိုယ်တော်၏ကုန်ပစ္စည်းရောင်းချခြင်း Start – ဘယ်လို Create ရန်, သင့်အွန်လိုင်းကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ချိခြင်းနှင့်တိုးတက်ကြီးပွားခြင်း!
ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာ Marketing ကိုအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် – I’ll Show You Best Practices for Google, Facebook က, Bing & Yahoo က.
ယာဉ်အသွားအလာနှင့် SEO ဆိုသည်မှာအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် – အဘယ်သို့ငါထက်ပိုအတူ Websites များအတွက်ခဲဗိသုကာနှင့်အမျှသင်ယူ 12 တစ်လလျှင်သန်းကိုလာရောက်လည်ပတ်သူများ – ၏နှင့် Digital Marketing ကိုဘတ်ဂျက် 1.5 တစ်နှစ်လျှင်သန်းအထိ!
အကြောင်းမူကားကျွန်တော်တို့ရဲ့ System ကိုကြိုးစား 50% off ပြီးတော့ငါးဖြည့်စွက်အကျိုးကျေးဇူးများ Get:
ထိုမယ်ဆိုရင် 50% discount isn’t enough to walk you through creating, အွန်လိုင်းမှထုတ်ကုန်ပစ္စည်းပစ်လွှတ်နှင့်ကြီးထွားလာ, ငါးပါးဆုကြေးငွေချက်ကိုလှည့်ကွက်ပြုပါမည်ဟုထက်:
* အကျိုးခံစားခွင့် #1: ငါတို့သည်သင်တို့၏စံပြ client ကိုရှာတွေ့မှသင်မည်သို့ပြအောင်မြင်မှု၏အခြေခံအုတ်မြစ်ချထားမည်!
ငါသည်သင်တို့၏အသိပညာနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုကို ယူ. တစ်ကြောက်မက်ဘွယ်ထုတ်ကုန်သို့လှည့်ရန်သင်မည်သို့ပြသသွားပေါ့. ကိုယ့်ပျော်ရွှင်သောသင့် client စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာသင့်ကိုချစ်တဲ့စာရင်းပေါက်မှသင်မည်သို့ပြသပါလိမ့်မယ်.
သင့်ရဲ့စာရင်းကြီးထွားလာသင့်ရဲ့ဝင်ငွေကြီးထွားလာ၏အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. ငါသည်လည်းသင်တို့၏စာရင်းအလွန်မြန်ဆန်သောစိုက်ပျိုးနည်းသင်ပြသပါလိမ့်မယ်, သိသောလူတို့နှင့်အတူ, တူနှင့်သင်ယုံကြည်.
* အကျိုးခံစားခွင့် #2: ထိုခဏခြင်းတွင်စတင်ရောင်းချ! I’ll help you make your product irresistible – ချက်ခြင်းရောင်းချနေစတင်ရန်.
တစ်စိတ်တစ်ဒေသ2သငျသညျသငျ၏အ Awesome ကိုထုတ်ကုန်ပစ္စည်းနှင့်အရောင်းအက္ခရာများ Create သည်အဘယ်မှာရှိ. I’ll show you how to make your product irresistible to your ideal clientele.
သင် options နှစ်ခုရှိ - နှင့်ဒီမှာအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းင့်:
သင်လက်ရှိထုတ်ကုန်ရှိပါက – သင်ချက်ချင်းရောင်းချနေစတင်နိုင်ပါသည်!
သင်တစ်ဦး၏ထုတ်ကုန်ရှိသည်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် – I’ll show you how to create one and then start selling it – ကုတ်ခြစ်ရာမှ!
I’ll show you how to start using social media and to start reaching your ideal clients immediately. သင်တန်း၏ရလာဒ်များကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါသည်, သင်မူကားယခုရောင်းချနေစတင်ရန်သင့်ကြော်ငြာတွေစမ်းသပ်ရန်နှင့်လူမှုမီဒီယာကတော့ဖန်တီးဖို့ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူကြလိမ့်မည်.
ဤသူတို့သည်အလုပ်၏နှစ်ဦးစလုံးနှင့်တစ်နှစ်လျှင်တစ်ဦးသန်းဒေါ်လာကျော်, ငါ၏ clients များနှင့်သူငယ်ချင်းအချို့ရာ၌ခန့်ထားပြီ!
* အကျိုးခံစားခွင့် #3: ကိုယ့်ပုံကိုလောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်အင်တာနက်ပေါ်မှာကြော်ငြာနှင့်ရောင်းဖို့သင်ဆုံးမသွန်သင်လိမ့်မယ် - ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သုံးစွဲဖို့ဖြစ်ပါတယ် 1 ကြော်ငြာပေါ်နှင့်လက်ခံရရှိ2ပြန်လာအတွက်.
Facebook ကကြော်ငြာ, Google က, Bing, Yahoo နှင့်အခြားကြော်ငြာများ. ငါသည်သင်တို့ကိုငါနှစ်ခုနစ်နှစ်ပတ်လုံးမြှောင်နှင့်ပြည့်စုံကျော်ယူကြပြီတာအကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များနှင့်လှည့်ကွက်ကိုသွန်သင်ပါလိမ့်မယ်. ငါသည်သင်တို့ကိုငါဖန်ဆင်းအမှားပြသပါလိမ့်မယ်, နှင့်အမြတ်အောင်ငွေကုန်ကြေးကျအမှားတွေကိုရှောင်ရှားပြီး Snowballs ကဲ့သို့စိုက်ပျိုးနည်း.
ငွေရှာလွယ်ကူရှင်းလင်းသည်. ဒီအဖြစ်ရိုးရှင်း: တန်ဖိုး + Marketing = အခွန်ဝန်ကြီးဌာန. အားလုံးသည်စီးပွားရေးအခြေခံအားဖြင့်ထည့်သွင်းတာဖြစ်ပါတယ် 1 နှင့်ဆိုတော့2ပြန်လာအတွက်. ထိုငါသည်သင်တို့ကိုသွန်သင်မည်ကားအဘယ်သို့.
* အကျိုးခံစားခွင့် #4: ငါထိရောက်သောအွန်လိုင်းကြော်ငြာဖန်တီးခြင်းမှတဆင့်သင်လမ်းလျှောက်ပါလိမ့်မယ် – Facebook ကအဘို့အကောင်းဆုံးသောလေ့ကျင့်, Google က, Bing မှနဲ့ Yahoo!
ကိုယ့် Website တစ်ခုဖန်တီးနည်းကိုသင်ပြသနှင့်သင်၏သင်တန်းရောင်းချပါလိမ့်မယ်. သင့်ရဲ့မွို့တျောတှငျလောကီသားအပေါင်းတို့ကျော်.
I’ll show you how I am getting less than .01 cent clicks to my client’s sites and the Ads that are working.
I’ll show you how to do online video and make it look amazing.
* အကျိုးခံစားခွင့် #5: ကိုယ်တော်၏ကုန်ပစ္စည်းတိုးတက်ကြီးပွားစေရန်မည်သို့!
သင်တစ်ဦးအဖိုးတန်ထုတ်ကုန်ကိုမည်သို့ဖန်တီးသိရကြလိမ့်မည်, ဤသင်တန်း၏အဆုံးသတ်ရလဒ်, ရောင်းသည်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်.
I’ll show you how to grow traffic to your website.
သင်လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော် ပို. ပင်အွန်လိုင်းထုတ်ကုန်ကိုဖန်တီးရန်တူညီသောအဆင့်များအတိုင်းလိုက်နာရန်လိုအပ်သည်မုချခံစားရလိမ့်မည်.
ဒီ BEST တစ်ဦးဖြင့်ဖုံးလွှမ်း 30 DAY 100% ငွေပြန်လည်အာမခံ. YOU မပျော်ရွှင်ဘူးဆိုရင်, ့သိပါစေငါသည်လည်းသင်တို့၏ကုန်ကျစရိတ်ပြန်ဦးမည် – NO မေးခွန်းတွေမေး.
WHEW! That’salot of goodies… သင်တို့အဘို့အကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုသင်တန်းသင်တန်း system ကိုကြိုးစားသောအခါသင်ကအားလုံးကိုရ 50% သွား.
သတိပေး, ကျနော်ခန့်သာအတူအလုပ်လုပ်နိုင် 30 တစျခြိနျကလူငါသည်ငါ၏စာရင်းအပေါ်လူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏များ (ကိုယ့်သေးသူတို့အားဤကမ်းလှမ်းချက်ကိုကိုစလှေတျဘူး) ... ငါ့အလေ့ကျင့်ရေးအမြဲဖွင့်အပြည့်ရှိသည်. So go here right now and claim your ticket before they’re all gone!
CEO ဖြစ်သူ World Class မီဒီယာ
(အကောင်းဆုံး Value ကို) နှစ်စဉ်နည်းပြစျေးနှုန်းကို $970 – တဘက်က $1,030!
သင့်ရဲ့နည်းပြစျေးနှုန်းကို = $80 တစ်လလျှင်!
[s2Member-PayPal-Button level=”1″ ccaps=”” desc=”Bronze Member / description and pricing details here.” ps=”paypal” lc=”” cc=”ယူအက်​​စ်ဒီ” dg=”0″ ns=”1″ custom=”amazingdigitaltraining.com” ta=”0″ tp=”0″ tt=”D” ra=”970″ rp=”1″ rt=”Y” rr=”1″ rrt=”” rra=”1″ image=”default” output=”button” /]100% 30 Day ကိုကျေနပ်မှုအာမခံ
My lawyer made me say this:
Results may vary. I can not guarantee you will have the same results I have.
Only Action = Results
အကြှနျုပျ၏ကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့်အတူ Network ကို:
ကျွန်တော့်အမည်မှာ ချားလ်စ်ယောဟန်သည်, လူအခြို့ကချာလီငါ့ကိုခေါ်. ငါ World Class မီဒီယာ၏ CEO ဖြစ်သူနှင့်တည်ထောင်သူဖြစ်ကြောင်းကိုနှင့် 3D ကို Web Design ကိုသွားပါ, အဖြစ်ကောင်းစွာ၏အဓိကအာဘော်အဖြစ် viral Marketing ကိုသတင်း. ကျနော်တို့ထဲမှာတည်ရှိပါတယ်နေကြတယ် Los Angeles မြို့, , CA တစ်ခုနှင့်အဖြစ်အလုပ်လုပ်ကိုင် ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာကုမ္ပဏီလီမိတက် Marketing ကို ရန် Web ပေါ်ရှိက Business Assist.
အံ့သြဖွယ်ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းပညာသင်တန်းကို © 2017